China mpanamboatra rano maloto azo atsofoka (0.75-7.5Kw) mpanamboatra sy mpamatsy | KAIQUAN
● mikoriana: 5-150m3 / h
● Loha: Mahatratra 42m
● Suhu amin'ny ranoka: ＜ 40ºC
● Dity amin'ny rano: ≤1050kg / m3
● Sarobidy PH: 4 ~ 10
WQ / EC Series Paompy maloto ao anaty rano
WQ / EC Vovo-drano azo alentika kely azo alentika:
1. Vatan'ny paompy voafidy sy impeller
Ny teknolojia CAD dia ampiasaina hanovana imbetsaka ny famolavolana, mba hifanaraka tsara ny vatan'ny paompy sy ny mpanentana ary mora ny mandalo ny kofehy sy ny fako nefa tsy voafandrika sy voasakana. Ny impeller dia voalanjalanja tsara, ka ny paompy dia misy hovitrovitra ambany sy fandidiana miorina.
2. Motera rendrika azo atokisana
Ny motera submersible natokana manokana sy namboarina dia manana haavon'ny fiarovana ny IP68 ary ny stator miolakolaka dia insulation F-class. Noho ny fihenan'ny fihenan-tsakafo sy ny fiakaran'ny maripana ambany, ny motera dia mateza kokoa.
3. Ny moto dia misy famehezana mafy sy fanaraha-maso henjana
4. Fametrahana azo antoka azo itokisana
Ny bearings baolina amin'ny alàlan'ny alàlan'ny marika malaza dia voafantina, izay manana maridrefy ampy mba hiantohana ny fiasa azo antoka amin'ny vokatra.
5. Fiasa fampifangaroana jet
Misy lavaka fampifangaroana jet misokatra amin'ny vatan'ny paompy. Rehefa mandeha ny paompy, ny rano misy tsindry ao anaty paompy dia mamorona fiaramanidina haingam-pandeha amin'ny alàlan'ny lavaka jet ho an'ny fikolokoloana mahery vaika, hany ka mihantona ny loto maro be, entin'ny paompy ary esorina. Tsy hisy rotsakorana hipoitra amin'ny faritra lehibe kokoa, izay tsara kokoa noho ny fikorontanana mekanika fotsiny amin'ny seranan-tseroka paompy.
6. Fitaovana fiarovana
Ny singa fiarovana overheating dia napetraka ao anaty fiolahana motera. Rehefa mihoatra ny mari-pana voalaza ny mari-pana miolakolaka dia hamelona ny jiro famantarana "overheating" amin'ny alàlan'ny kabinetra fanaraha-maso elektrika ny singa miaro amin'ny hafanana. Ampahatsiahivo ny mpandraharaha hijery raha te hahalala ny antony nahatonga ny hafanana be loatra amin'ny motera. Aorian'ny fihenan'ny maripana, dia miverina ho azy ilay singa miaro amin'ny hafanana be loatra, ary azo alefa ny motera. Na izany aza, tsy tokony halefa izy io mandra-pahatongan'ny famonoana be loatra.
Teo aloha: Axial azo asitrika, paompy mikoriana mifangaro
Manaraka: Paompy azo alentika ao anaty rano （11-22Kw）
WQ / EC Kisary malemy azo alaina ao anaty rano maloto ao anaty rano maloto ao anaty rano
WQ / EC Drafitra fananganana rano maloto ambany rano azo alentika
paompy azo alentika, pump booster, paompy tosika rano, motera an-drano, vidin'ny paompy ao anaty rano, pompom-boaloboka, fantsom-boaloboka!